Qatar Airways ayaa dib u bilawday duulimaadkeedii Tokyo Haneda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa dib u bilawday duulimaadkeedii Tokyo Haneda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Japan • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay ku dhawaaqday inay dib u bilaabi doonto duulimaadyadii saddexda toddobaadlaha ahaa ee Tokyo Haneda, Japan laga bilaabo 11ka Diseembar 2020. Adeegyada magaalada caasimadda ah ee Japan waxaa maamuli doona shirkadda casriga ah, Boeing 77W oo bixisa 42 kursi oo flatbed ah, iyo 312 kursi oo ah Qaybta Dhaqaalaha. Shirkaddu waxay kaloo hadda duulimaad toddobo-toddobaadle ah ka samaysaa inta u dhexeysa Tokyo Narita iyo Doha.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah diyaaradaha kaliya ee caalamiga ah ee dayactiray jadwal muhiim ah inta lagu gudajiray cudurkan safka ah ee COVID-19, Qatar Airways ayaa si gaar ah u taagan si ay ula socoto isbeddellada qulqulka taraafikada iyo tikidhada rakaabka. Diyaaraddu waxay u qorsheysay duulimaadyadan inay si toos ah ugu xirmaan xarunteeda abaalmarinta ku guuleysatay, Hamad International Airport, halkaas oo rakaabka Japan ay ku raaxeysan karaan fursado safarro badan oo dabacsan.
Mudane Thomas Scruby, Madaxweyne ku-xigeenka, Pacific, Qatar Airways ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan dib u bilawno howlihii shirkadda Tokyo Haneda, iyadoo qeyb ka ah dadaallada dib-u-dhiska shabakadeena gobolka Aasiya iyo Baasifigga. Dib-u-bilaabiddani waxay siin doontaa isku xirnaansho caalami ah oo dheeri ah rakaabkeenna Japan. Qatar Airways ayaa cadeysay inay tahay diyaarad mas'uul ah oo lagu kalsoon yahay rakaabka adduunka oo dhan waxayna si nabad ah ula wareegtay 2 milyan oo qof guryahooda intii lagu jiray dhibaatadan. Maaddaama ay xaddidan tahay xaddidaadda gelitaanka adduunka, waxaan sidoo kale rajeyneynaa in aan dib u soo celinno waddooyin badan maadaama aan higsaneyno in aan ka hawlgalno in ka badan 120 meelood illaa dhammaadka sanadka si aan si fiican ugu xirno rakaabkeenna adduunka intiisa kale. Qiyaasaha badbaadada saaran Qatar Airways ee saaran rakaabka iyo shaqaalaha guriga waxaa ka mid ah bixinta qalab ilaalin shaqsiyadeed (PPE) oo loogu talagalay shaqaalaha qolka iyo xirmo difaac oo amaan ah iyo gaashaan la iska tuuri karo oo loogu talagalay rakaabka. Rakaabka Heerka Ganacsiga ee diyaaradda ku qalabeysan ee loo yaqaan 'Qsuite' ayaa ku raaxeysan kara asturnaanta kor loo qaaday ee kursi abaalmarintan abaal-marinta ah ay bixiso, oo ay ku jiraan kala-goysyada khaaska ah ee qarsoodiga ah iyo ikhtiyaarka ah in la isticmaalo tilmaame 'Ha Dhibin' (DND) Qsuite waxaa laga helaa duulimaadyada in ka badan 30 meelood oo ay ku jiraan Frankfurt, Kuala Lumpur, London iyo New York.